ကောင်းကင်ဖြူ: January 2012
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:45 AM6comments
မင်္ဂလာပါ … ဗျာ … ။ အလုပ်ပိတ်ရက်မှာ စာလည်း မရေးဖြစ်ဘူး ။ ဒီ post လေးကိုတော့ ရေးနေတာ တော်တော် ကို ကြာပါပြီ ဒီနေ့တော့ လက်စသတ်ပြီး ကျနော် ငယ်စဉ် ကတည်းက စိတ်ဝင်စား မိတဲ့ ကရိဝိတ် အကြောင်း ကို သိသလောက်လေး ပြောပြပါမယ် … ။
ကျနော် အသက် ၁၂ နှစ်လောက်က အဖေ အမေ နှင့် အတူ ပထမဦး ဆုံး ရန်ကုန်မြို့အလည်ရောက်ခဲ့ ပါတယ် … ။ အမေရော အဖေရော ရန်ကုန် ဇာတိ ဖြစ်တော့ ရန်ကုန် မှာ အမျိုးတွေ အများကြီး ရှိတာပေါ့
မှတ်မှတ်ရရ ဦးလေး ဖြစ်သူ က ကျနော် တို့မိသားစု ကို ရန်ကုန်က ကရဝိတ်ဖောင် ကို
ခေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဟိုရောက်တော့ ဌက်နှစ်ကောင် ပုံ လုပ်ထားတဲ့ လှေကြီး ကို တွေ့ တော့ ကျနော် အထူးအဆန်း လို ကြည့်နေမိရင်း ဦးလေး ဖြစ်သူကို ဒါဘာ ဌက်လည်း လို့မေးကြည့်တော့ ဦးလေး က ဟင်္သာ တဲ့ ၊ ဒါကို ကရဝိတ် ဖောင်လို့ခေါ်တဲ့ ကြောင်းပြောပြပါတယ် … ။ ဟင်္သာ ဆိုရင် ဘာလို့ဟင်္သာ ဖောင် လို့မခေါ်ပဲ ကရဝိတ် ဖောင်လို့ခေါ်ရတာလည်း လို့မေးမိပါတယ် … ။ ဦးလေး ဖြစ်သူက ငါ လည်း မသိဘူးတဲ့ …. ။
အဲ့ဒီအချိန် က စပြီး ကရဝိတ် ဆိုတာဘာလည် လို့သိချင် ခဲ့တာပါ … ။ ဦးလေး ပြောတဲ့ ဟင်္သာ ဆိုတာတော့ လက်ခံ တယ်လေ … ဘုရား တွေ မှာ တွေ့ ဘူးတဲ့ ဟင်္သာ ပုံ နဲ့တူနေတာကို .. ။
နောက်ပိုင်း အသက်တွေ ကြီးလာတော့ ကရဝိတ်ဖောင် အကြောင်းကို ပို သိလာခဲ့ရပါတယ် ကရဝိတ်ဆို တာ ဘာလည်း လို့သိတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ရန်ကုန် မှာ တွေ့ ခဲ့တဲ့ ကရဝိတ် ဖောင်တော် လိုမျိုး မန္တလေး မှာ လည်းရှိ တယ် ဆိုတာရယ် ၊ မြန်မာ ဘုရင်တွေ ရေလမ်းခရီ သွားရင် အသုံးပြု တဲ့ ဖောင်တော် ဆိုတာလောက် သိခဲ့ ပါတယ် ။
နောက်တစ်ခု က ဖောင် ရှေ့ မှာရှိတဲ့ဌက်ရုပ် ပုံ ပါ ။ တော်တော် များများ ကို မေးကြည့်တော့ လည်း ဦးလေး ပြောသလို ဟင်္သာတဲ့ ၊ ကိုယ် တိုင်လည်း တွေ့ ဘူးတဲ့ ဟင်္သာပုံ တွေနဲ့ယှဉ် ကြည့်တော့ ဟင်္သာ ဆိုတာငြင်းလို့မရဘူး လေ … ။ ခက်တာက ကိန္နရာ၊ ကိန္နရီ ၊ ဂဠုန်၊ ဟင်္သာ ဆိုတဲ့ ဌက်တွေ ကို ဘယ်သူမှ မြင်ဘူး တာမဟုတ်ဘူးလေ ။ ပန်ချီ ဆရာ ချယ်သ မှု့ နဲ့ခေတ် အချိန်ခါ ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလည်းနေတော့ ဟင်္သာ ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံရှိတယ်လို့တိတိကျကျ ပြောမို့ခက်တာပေါ့ ။
နောက်တော့ လက်လှမ်း မှီတဲ့ စာအုပ်တွေ ထဲမှာ ဖတ်ကြည့်တော့ ဖော်တော် ထိပ် က ဌက်က ဟင်္သာ ဆိုတာ ပို ယုံသွားပါတယ် … အဖေ စာအုပ်စင်ထဲက ကာတွန် ဦးဘကလေး ရေးတဲ့ လေးဆစ် ကဗျာ လေး ဖတ်လိုက်ရလို့ ပါ … ထိုကဗျာလေးမှာ “ မြောင်းမြ သွား ၊ များလိုက်တဲ့ အကြိုတော် ၊ ကရဝိတ်ဖောင် ဟင်္သာမကရ်း တွေနဲ့ ၊ စိမ်းနီပြာ မီးရောင်လွှမ်း ပါလို့၊ ကမ်းညွှတ်လုနော် ” …. အစချီ တဲ့ ကဗျာ လေးကို ဖတ်လိုက် တော့ ဒါ ဟင်္သာ ရုပ် ပဲလို့ ပို ပြီ ယုံကြည်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပင်မဲ့ ဟင်္သာ ရုပ် ထားပြီ ဘာလို့ဟင်္သာ ဖောင်လို့မခေါ်တာလည်းလို့တွေးကြည့်မိပြန်တယ် … ။ ဒါနဲ့ဒီ အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မလေ့လာမိတော့ပါဘူး … .. ။
ဟိုတလော က ရတု ကဗျာ တွေ အကြောင်း လေ့လာမိရင်း ရတု ကဗျာ တစ်ပုဒ် မှာ ကရဝိတ် ဆိုတာ ပြန်တွေ့မိပြန်ပါတယ် ။ အင်းဝ ခေတ် စာဆိုတော် သျှင်ကရဝိက ရေးတဲ့ မင်းရဲကျော်စွာ လေးထပ် ကျောင်းတည် မော်ကွန်း ရတု မှာ စာဆိုရှင် ဟာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား ၏ အသံတော် ကို ကရဝိတ် ဌက် ရဲ့ အသံ နှင့် ခိုင်းနှိုင်း ဖွဲ့ ဆိုထား တာတွေ့ ရလို့ ပါ ။
အဲ့တော့မှ ကရဝိတ် ဌက် ဆိုတာ တကယ် ရှိပါလား လို့ တွေးမိရင်း ရတု ကဗျာတွေ ကို ခဏ ထားပြီး ကျနော် သိချင်တဲ့ ကရဝိတ် ဌက်အကြောင်း ရှာပုံတော် လုပ်မိပြန်ပါတယ် … ။
နောက်ဆုံးတော့ ကရဝိတ်ဌက် အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာပေ နှစ်ခု ရှာတွေ့ ခဲ့ပါတယ် .. ။ တစ်ခုက ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ သမိုင်းထဲက ဒီဇိုင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာပါ တဲ့ ကရဝိတ် အကြောင်း နှင့် မြန်မာ့စွယ်စုံ ကျမ်း အတွဲ (၁) စာမျက်နှာ ၇၆ ၊ ၇၇ တွင်ပါရှိသော ကရဝိတ်ဌက် အကြောင်းပါ ။ ထိုအကြောင်းရာ လေး ကို အနည်းငယ် ဖော် ပြ လိုပါတယ် ။
ကရဝိတ် ဌက်သည် ဟိမဝန္တာ ဥသြ တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ၊ ဟင်္သာ လို ခြေတံတို ဘဲမျိုး မဟုတ်ပဲ ကရ၀ိတ်က ခြေတံရှည် ကြက်မျိုး ဖြစ်ပါ တယ် ။ အသံ မှာ ငိုငြီးသံ ဖြစ်ပြီ လွန်စွာ သာယာ သော အသံ လို့ ရှိတယ်လို့မှတ်သားခဲ့ ရပါတယ် ။
ကရဝိတ် ဖောင် ဟုခေါ်သော ရေယာဉ် တွင် ကရဝိတ် ဌက် ၏ ပုံ ကို တည်ဆောက်လေ့ ရှိသော် လည်း နှုတ်သီး ၊ ရင်အုပ် ၊ အတောင် နှစ်ဖက် နှင့် ဌက်တစ်ကောင် အဖြစ် ကိုသာ သာမန်အားဖြင့် ရှိသော်လည်း အမှတ်သား အတိကျ မရှိ ပါ ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် ဤ ဌက်၏ ဥ ၊ အသိုက်နှင့် အလေ့ထ များကို ဘယ်သူမှ အတိကျ မသိ လို့ပါ ။
မြန်မာမှုနယ် မှာ ဟင်္သာရုပ်ကို ညီညွတ်တင့်တယ်မှုကိုပြ တယ်လို့မှတ်ယူ ကြသလို ၊ ကရဝိတ်ဌက် ရုပ် ကိုတော့ မြင့်မား၊ ရင့်ကျက်၊ တင့်တယ်မှုကို ပြတယ် လို့မှတ်ယူ ကြပါတယ် ။
ထို့ ကြောင့် မြန်မာ ဘုရင် များ ရေကြောင်း ထွက်တော် မှု လျှင် တိုးဖောင်တော် ၊ စာမရီဖောင်တော်၊ ကရဝိတ်ဖောင်တော် ဟူ၍ ဖောင်တော်အမျိုးမျိုးရှိ သော်လည်း ကရဝိတ် ဖောင်တော် ကို ဘုရင်ဧကရာဇ်နှင့် မိဖုရားခေါင်ကြီးများသာ အသုံးပြုခြင်း ၊ စစ်ချီတက်ရာ၌ အသုံး ခြင်း ဖြင့် ရှင်ဘုရင် ၏ မြင့်မြတ် တင့်တယ် မှု့ ကို ဖော်ဆောင် ကြောင်း မှတ်သာ ခဲ့ရပါတယ် … ။
အဲ့လို ဖတ်မှတ်ပြီးတော့မှ ကျနော် ရန်ကုန် မှာ မြင်ခဲ့ ရသော ကရဝိတ် ဖောင် မှာ ဟင်္သာ မဟုတ်မှန်း သိခဲ့ ရပါတယ် ..... ဗျာ ….. ။
ရန်ကုန် က ကရဝိတ်ဖောင် တော်ပါ (google မှာ ကူးယူ ခဲ့ပါသည်)
ရှေ့ ခေတ် ကရဝိတ်ဖောင် ပုံပါ ( google မှ ကူးယူ ခဲ့ပါသည် )
ရတနာပုံခေတ် ကရဝိတ်ဖောင် ပုံပါ
( မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) စာမျက်နှာ ၇၇ တွင် ပါရှိသော ဓာတ်ပုံ ကို ကိုယ်တိုင် ရိုက်ယူ ဖော်ပြသည်)
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:43 AM 11 comments
ပျော်ရ သေးသည် …............ ။
ရွှင်ရ သေးသည် …............. ။
ယမ်းငွေ့ဝေတဲ့
မျှော်ရ သေးသည် ……....... ။
ပူရ သေးသည် …............. ။
ဒီကဗျာ လေးကို ရေးပြီးတာ ၂ ပတ်လောက် ရှိပြီ ထင်ပါတယ် ... ။ တရုတ် နှစ်ကူး ပိတ်ရက် မှာ မောင်ဘုန်း တစ်ယောက် ငွေယား လေးတွေ ရတာ နဲ့ လက်ယား ခြေယား ဖြစ်ကာ ငြိမ်ငြိမ် မနေနိုင်ပဲ လမ်းများ ခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့ တော့ ရှိတဲ့ ငွေယား လေးတွေ လည်း ကုန်သလောက် ရှိပြီ် မို့အယားလည်း ပြေ အမောဆို့ ကာ နေရပ် ဆီအုန်းတော ကို ပြန်ရောက်ပြီး ဒီနေ့ညမှ ဒီ ကဗျာ လေး တင်လိုက်ရတာပါ ... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:52 AM5comments
LIVING TOGETHER နှင့် အမျိုးသမီး အခွင့်ရေး ဆိုတဲ့ post လေးကို ဘာရည်ရွယ်ချက် နဲ့ရေးတယ် ဆိုတာ ကျနော် ဖော်ပြပြီးသာပါ ... ။ နောက်ပြီ ခေတ်အဆက်ဆက် အမျိုးသမီးအခွင့်ရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကိုလည်း ကျနော် သိသလောက်လေး ဆက်လက်ရေးသား နေပါတယ် ဆိုတဲ့ ကြောင်းကိုလည်း အသိ ပေးခဲ့ ပါ တယ် ... ။ သေသေချာချာ ပြည့်ပြည့် စုံစုံလေး ရေးချင်လို့ ပါ ... ။ အခုတော့ ဆက်မရေးလို့မရတော့ တဲ့ အခြေနေကို ရောက် နေပါပြီ ... ။
LIVING TOGETHER နှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်ရေး ဆိုတဲ့ post မှာ Anonymous said နေနှင့် comment ရေးသား တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး နှင့် တရားရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်း ဆိုတဲ့ အစ်မ နှစ်ဦး ရဲ့ မေးမြန်း ချက်ကို ပဲ အဓိကထား ဖြေကြား ရေးသား သွားပါမယ် ... ။
ပထမဦးဆုံးအနေ နှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆိုတဲ့ အစ်မ ရဲ့ comment ကို ပြန်လည် ဖြေရှင်းခဲ့ သော ကျနော် comment တွင် " ကန့် ကွက် " ဟူသော စကားရပ်ကို သုံးမိခဲ့သည့် အတွက် ဦးစွာ တောင်းပန် လိုပါတယ် ... ။
အစ်မတို့ ရေ ... မြန်မာအမျိုးသမီးများ အတွက် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ဆိုင်ရာမှာ တန်းတူအခွင့်ရေး ရရှိစေတဲ့ ဥပဒေ ကို ၁၉၅၄ မှာ ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့တယ်နော် ... ဒီ ဥပဒေဟာ အားနည်းချက် များစွာ ရှိတယ်လို့ကျနော် မောင်ဘုန်း အထက်ပါ post မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ... ။ ကျနော် ရှင်းပြပါမယ် .... ။
၁၉၅၄ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ ဆိုတာ .... (၁၉၃၄-၁၉၃၈) ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ (အတည်မဖြစ် ခဲ့သော ) ကို ၁၉၅၄ မှာ ပြင်ဆင်ပြီ ၊ ၁၉၅၄ မှာ ပဲ ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ ပါတယ် ... ဒီ ဥပဒေ ဟာ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆိုသော .... အစ်မ ပြောသလို မြန်မာအမျိုး သမီးများ အတွက် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ မှာ တန်းတူအခွင့်ရေး ရစေတယ် ဆိုတာ ကျနော် လက်ခံ ပါတယ် ... ။
ဒါပင်မဲ့ပ ဥပဒေ ရဲ့ ခေါင်းစဉ် က ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများ ဟု ဆိုဒါကြောင့် ဒီ ဥပဒေဟာ ဘာသာခြားတိုင်းရင်း သား အမျိုးသမီးများ နှင့် မဆိုင်သလို ဖြစ်နေခဲ့ပါ တယ် ... ။
ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် မှာ ဘာသာခြားတိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးများ နှင့် မဆိုင်စေရ ... ဆိုတဲ့ စကားရပ် မပါသော် လည်း ၊ ။ ဒီ ဥပဒေကို လက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့ တရားစီရင်ရေး မှာတော့ တရားပြိုင်း အနေနှင့် ထို့အချက် ကို ထောက်၍ လျှောက်လှဲချက် ပေးတက်တာ ကို တရားရေးဆိုင်ရာအမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း ဆိုတဲ့ အစ်မ အသိ ဆုံးနေမှာပါ .... ။
ဥပဒေ တစ်ခု ပြဋ္ဌာန်း ချက်သည် လူမျိုး ဘာသာ မရွေး သက် ဆိုင်တဲ့ ပြဋ္ဌာန်း ချက်ပဲ ဖြစ်သင့် မဟုတ်လော ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ လူမျိုးအများစု ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သော်လည်း ဥပဒေအရ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ် ခွင့် ဖော်ပြထား ပါတယ် .. ။ ထို့ ကြောင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ မှာ ကြည့်မယ် ဆို၇င်လည်း ဘာသာခြား ထုံးထမ်း စဉ်လာ ဥပဒေ ကို တရားစီရင်ရေး မှာ အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ် ... ။
ဒါကြာင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာ အမျိုးသမီးများ ဘာသာခြားကို လက်ထပ်ခြင်းဖြစ်စေ .. ၊ ဘာသာခြား အမျိုးသမီးများ လက်ထပ်ခြင်းဆိုင်ရာ မှာ ၁၉၅၄ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ ဆိုတာ... တန်းတူ အခွင့် ရေး မရှိခဲ့ ပါဘူး ...။
အစ်မတို့အနေ နှင့် ထိုအချက်ကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည် ဟု ပြောဖွယ်ရာ ရှိပါတယ် .... ဘာကြောင့် လည်း ဆို၇င် တရားစီရင်ရေး တစ်ချို့မှာ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် ထိုအချက်ကို ကာကွယ်ပေးထား တာတွေ ရှိပါ တယ် .. ။
၁၈၉၈ခုနှစ်မှာ မြန်မာထုံးတမ်းစဉ်လာ ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာ့ထုံးတမ်းအရ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း သည် ဘာသာရေးနှင့်မဆိုင် ၊ လောကီရေးရာသာဖြစ်သည် ။ ထို့ ကြောင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည် လူမှုရေး ကိစ္စဖြစ်သည် ... ဟု ဆိုသောအချက်ကို ထောက် ၍ တရားစီရင် ရေး နှင့် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ကို ကာကွယ် ပေးထားတာ တွေ့ ပါတယ် … ။
ဒါပင်မဲ့ တရားစီရင်ရေးတိုင်း မှာ ကာကွယ် ပေးခဲ့ တာမဟုတ်ဘူး နော် ... ဥပမာ အနေ နေနှင့် တရားစီရင် ခြင်း တစ်ခု ကို ကြည့် ရအောင် ဗျာ
၄၊ဘားမားလောတိုင်း ၁၂၄တွင်ပါရှိသော ၀ီရှိန်နှင့် မနှင်းလှိုင်အမှုစီရင်ထုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာအမြဲနေထိုင်သည့်
တရုတ်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးနဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးတို့ နှစ်ဦးဆန္ဒအရ မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်း
ဥပဒေနဲ့အညီ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။ တရားဝင် လင်မယားအဖြစ် အထင်အရှား ပေါင်းဖက်နေထိုင်ခဲ့တယ်။
သားသမီးများ ထွန်းကားလာပြီးမှ တရုတ်အမျိုးသား ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ သေဆုံးသွားသော
တရုတ်အမျိုးသား ဆွေမျိုးများက ကျန်ရစ်သည့်အမွေကို ဆက်ခံလိုသဖြင့် တရား စွဲဆို ခဲ့ပါတယ် ... ရုံးတော် မှ
ထိုအမှု့ကို ထိုတရုတ် အမျိုးသားနှင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတို့၏ ထိမ်းမြားမှုမှာ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း
ဥပဒေအရ တရားဝင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း တရုတ်ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ တရားဝင်
အတည်ဖြစ်သည့် ထိမ်းမြားမှုမပြုခဲ့သဖြင့် ၄င်းတို့နှစ်ဦးသည် တရားဝင် လင်မယားအရာ မရောက်ခဲ့ဟု ရုံးတော် က
စီရင် ခဲ့ ပါတယ် ... ။
ထိုဖြစ်စဉ် ကို ကြည့်ရင် ရုံးတော်အနေ နှင့် လူမျိုးခြား ဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့ စီရင်ခဲ့တာ တွေ့ ရတယ်နော် ။
၁၉၆၆ ခု၊ မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံး ၆၀၇ မှာ ဖော်ပြချက်အရ ကိုသန်းငွေနှင့် မခင်ရီ အမှုစီရင်ထုံး တွင် အမှုဖြစ်ကြသူ လင်မယားမှာ တိုင်းရင်းသား ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါတယ် ။ အချင်းချင်း မသင့်မတင့်ဖြစ်ကြပြီး ခွဲခွာနေကြသော အခါမှာ မိန်းမက ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ဥပဒေအရ မယားစရိတ် လျှောက်ထား ခွင့် ရုံးတော် သို့ တောင်းခံပါတယ် ။
ယောက်ျား ဖြစ်သူ မှ သူတို့ မူလလက်ထပ်စဉ် ဘာသာရေးအရ လိုက်နာရမည့် ကျင့်စဉ်နဲ့ မညီ ချွတ်ယွင်းခဲ့သဖြင့် တရားဝင် လင်မယားအဖြစ်သို့ မရောက်ခဲ့ကြောင်း ရုံးတော် သို့ လျှောက်လှဲ ခဲ့ပါတယ် ။ ရုံးတော်က စီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါမှာ ......
၁ ။ အမျိုးသမီးများဘ၀ လုံခြုံမှု ကာကွယ်ပေးဖို့ အစိုးရမှာ တာဝန်ပါ ရှိတယ် ။
၂ ။ သူတို့ ဘယ်ဘာသာ ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာက ပဓါနမဟုတ်ပါ ။
၃ ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြား အိမ်ထောင်ပြုရေးသည် ဘာသာရေးကိစ္စမဟုတ်၊ လူမှုရေးကိစ္စသာ ဖြစ်သည် ။
ဟု ဆိုပြီး တရားရုံးမှ ယောကျာ်း ဖြစ်သူ ကိုသန်းငွေ ၏ လျှောက်လှဲ ချက် ကို ပယ်ချ ခဲ့ပါတယ် … ။
ဒီအမှု့မှာ တော့ ၁၈၉၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာထုံးတမ်းစဉ်လာ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်အရ မြန်မာ့ ထုံးတမ်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း သည် ဘာသာရေးနှင့် မဆိုင်၊ လောကီရေးရာသာဖြစ်သည် ။ ထို့ ကြောင့် လက်ထပ် ထိမ်းမြား ခြင်း သည် လူမှုရေး ကိစ္စဖြစ်သည် ... ဟု ဆို သော အချက် ကို ထောက် ၍ တရားစီရင် ရေး နှင့် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ကို ကာကွယ် ပေးထားတာ တွေ့ ရ ပြန် ပါတယ် ... ။
ဟုတ်ပြီ ... တရားရေဆိုင်ရာအမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း ဆိုသော အစ်မ ရေ ... အထက်ပါ အမှု့ မှာ အမျိုးသမီး အခွင့်ရေးကို တရားစီရင်ရေး လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် ကာကွယ်ပေးလိုက် သည် ဆိုသော်လည်း ကိုသန်းငွေ ၏ လျှောက်လှဲ ချက်ကို ခိုင်မာမှု့ မရှိ ဟု ဆိုပြီ ရုံးတော် က ပယ်ချ ခဲ့ ခြင်း မဟုတ်ဘူးနော် ... လုပ်ပိုင်း ခွင့် နှင့် ကာကွယ် ပေးလိုက် တဲ့ သဘောပါ ... ။
ဒါကြာင့် ကိုသန်းငွေအနေ နှင့် အယူခံဝင်ခွင့် ရှိပါသေးတယ်နော် .... ။ နောက်တစ်ချက်က ၁၉၅၄ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ အရ ဆိုးပြီး ကိုသန်းငွေ ရဲ့ လျှောက်လှဲ ချက် ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိ ဟု ရုံးတော် က ပယ်ချ လို့ရပါတယ် ။ ဒါပင်မဲ့ ဘာကြောင့် လို့ထင်ပါ လည်း ဗျာ ........။ ဒါ စဉ်းစားသင့် တယ်နော် .... ရှင်းပါတယ် ဗျာ ... ကိုသန်းငွေ ရဲ့ လျှောက်လွဲ ချက်ကို က ၁၉၅၄ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဘာသာခြား ထုံးတမ်း စဉ်းလာ ဥပဒေ အပေါ် မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ တင်ပြ ထား ခဲ့တာကို .... ။
ထို့ ကြောင့် ၁၉၅၄ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ ကို မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ရပ် လုံး အတွက် ထိရောက် ပြီး တိကျတဲ့ ပြင်ဆင် မှု့ လုပ်သင့်တယ်လို့... ထင်ပါလား အစ်မ တို့ ရေ ...
နောက်တစ်ခု ပြောအုံးမယ် ဗျာ .... အထက်ပါ အမှု့နှစ် မှာ ဖြစ်ရပ် ကို ဥပဒေ ဆိုတာ ခဏ ဖယ်ကြည့် လိုက် ဗျာ .... ပထမ ဖြစ်စဉ် မှာ လင်မယား အဖြစ် အတူနေထိုင် ပြီး သားသမီး ရသည့် တိုင် လင်မယား မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ် ခံရတယ်နော် ....
နောက်တစ်ခု လင်မယား ဖြစ်ခဲ့ ပြီးမှ မဟုတ် ပါဘူး လို့ငြင်းခံ ရတယ်နော် .....
ကယ် ....ထို အမျိုး သမီး များ နေရာက ကြည့် လျှင် တရားသည် လော ...
မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ဦး ဆိုသော အစ်ပြော သလို ရှုပ်ထွေးလှ လူမှု့ ရေးရာ ကို တိကျ တဲ့ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း လို့မရဘူ ဆိုတာကို ကျနော် လက်ခံပါတယ် ..။ နောက်ပြီ ဥပဒေ တစ်ခု ဟာ အချိန် ကြာလေလေ အားနည်း လာလေလေ ဖြစ်တက်လည်း သဘာဝ ပါ ... ။ ဒါကြောင့် လည်း မကြာခဏ ပြင်ဆင် ခဲ့ ရပါတယ် ။
ထို ဥပဒေ ကို ဘာကြောင့် အခု ထိ ထိရောက်တဲ့ ပြင်ဆင် မှု့မရှိ သည်လော .. ။
ထိုသို့ပြင်ဆင် ရန် ထိရောက်တဲ့ တောင်းဆိုမှု့ရှိသင့်သည် လော ... ။
သို့ တည်မဟုတ် တကယ် ပဲ ပြင်ဆင်မို့မလို အပ် သည် လော ... ။
နောက်ဆုံတစ်ခု ပြောအုံး မယ် ဗျာ .... ၁၉၅၄ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ မှာ တန်းတူ အခွင့် ရေး ရှိတယ် လို့အစ်မ တို့ပြောခဲ့ တယ် နော် .... ဟုတ်ပြီ ...
ယနေ့အချိန်ခါ မှာ အရမ်းခေတ်စား နေတဲ့ လက်ထပ် ထိမ်းမြား မှု့လေး တစ်ခု ရှိပါတယ် .... မော်ကွန်းတင် လက်မှတ်ရေးထိုး လပ်ထပ်မင်္ဂလာ ပြု သည် ဆိုတဲ့ .... လပ်ထပ် ထိမ်းမြား မှု့ လေး ပါ ....
အစ်မတို့ရေ ... နာမည်လေးလှ လို့လုပ်တာကြ တာလား ဗျာ ... ။ ဥပဒေ ဘာသာ ရပ် ကို သိတဲ့ သူ ဆို၇င် မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေကြမှာ နော် ... ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် ဥပဒေအရ အခိုင်မာဆုံး လက်ထပ်နည်း လို့ပြောလို့၇တယ် လေ .... ။
ဒါဆိုရင် ၁၉၅၄ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေဟာ ခိုင်မာ မှု့မရှိတော့သလို ဖြစ်သွား ပြန် ရော .... ထားပါ ....ဗျာ ... ။
လက်ထိပ်ထိမ်းမြား ခြင်းဆိုင်ရာ တန်းတူအခွင့်ရေး ရှိတယ် ဆိုရင် ... ပြောအုံး မယ် .... မော်ကွန်းတင် လက်မှတ် ရေးထိုး လပ်ထပ်မင်္ဂလာပြု တယ် ဆိုတာ ယနေ့ အချိန် မှာ အထက်တန်းလွှာ လူတန်းစား ပဲ ဘာကြောင့် လုပ်ရတာလည်း ဗျာ ... ။
ရှင်း ပါတယ် ဗျာ ... မော်ကွန်းတင် ထိမ်းမြား လက်ထပ် တယ် ဆို တာ ကျနော် တို့မြန်မာ ဘုရင် တွေ ခေတ် ကတည်း ရှိခဲ့ တာပါ ...ဘုရင် နှင့် မှုးကြီး မတ်ရာ တွေ ကိုယ် တိုင် အခမ်းနား ပြင်ဆင် ပေး ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် လက်ထပ် ထိမ်းမြားပေး ခြင်းကြောင့် ဘာ ဥပဒေ ... ညာ ဥပဒေ အရဆို ပြီး သူတို့လက်ထပ် ထိမ်းမြား ခြင်း ကို ကန့် ကွက် ခွင့် မရှိဘူးလေ ..... ။
ယနေ အချိန်ခါ မှာ တော့ သတိုးသား ဖြစ်သူ အတွက် ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ရှေ့ နေ တစ်ဦး သတိုး သမီး ဖြစ်သူ အတွက် ရှေ့ နေ တစ်ဦး ၊ ထို ရှေ့ နေ များကို သတိုးသား ၊သတိုး သမီး မှ GP ( General power )လွှဲ အပ်၍ တရားရေးဆိုင် ရာ အနည်း ဆုံး အရာတန်း အဆင့် ရှိ တရားသူ ကြီး တစ်မှ နေ၍ ထိုက်သင့် တဲ့ အခမ်း နား ပြင်ဆင် မှု့နှင့် တကွ မော်ကွန်း တင် လက်ထပ် မင်္ဂလာ ပြု ကြပါတယ် .....
တရားရေ ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း ဆိုသော အစ်မ ရေ ...
မြန်မာ ဘုရင်တွေ ခေတ်တုံးက တော့ ဘုရင်က အကုန်ကျခံ တဲ့အပြင် ဆုတော် ဘွဲ့ တော်တွေပါ ချီးမြှင့် တက်ပါတယ် ... ။ ယနေ အချိန်မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ဘဏ်လမ်း ထဲမှာ GP စာချုပ် တစ်စောင် ကို ၂၀၀ကျပ် (လွန်ခဲ့သော ၅နှစ်) နှင့် အလွယ် တကူ ဝယ်လို့ ရသော် လည်း ရှေ့ နေ တစ်ဦး ကို GP လွှဲ ခ ဘယ်လောက်ပေး ရတယ် ဆိုတာ အစ်မ အသိဆုံး ပါ ... အခု ကိစ္စ မှာ နှစ်ဦး စာ .... နောက်ပြီ အရာတန်း အဆင့် ရှိ တရားသူကြီး ဆိုလည်း ရုပ်ရှင် တွေထဲမှာ လို မေတ္တာ ဖြင့် သရုပ်ဆောင် သည် မဟုတ် ... တိုက်သင့် တဲ့ အခမ်း နား ဆိုတာလည်း ကြယ် ဘယ်နှ လုံး အဆင့် ရှိ ဟိုတယ် ... စသည့် ခြေနေ ရှိပါတယ် ။
ဆီးကို ရေချိုး ဆေးရိုး မီးလှုံ ဟု ဆိုသော သော်လည်း .... စည်ပင် ရေချိုး ပြီး ကောက်ရိုး မီး လှုံ နေရသော အခြေခံ လူတန်းစား များ ဥပဒေ အရ အရမ်း ခိုင်မာ တဲ့ မော်ကွန်း တင် လက်ထပ် ခြင်း မပြု နိုင်ရှာဘူး ဗျာ ....
ကယ် .... မြန်မာ အမျိုးသမီး များ လပ်ထပ် ထိမ်းမြား ခြင်း ဆိုင်ရာ ... တန်းတူ ..... အခွင့်ရေး ......
ကျနော် မောင်ဘုန်း ပဲ ... မမြင်မိ သည်လော .....
လေးစားစွာ ဖြင့် ....
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:30 AM7comments
Labels: ပြန်လည်ဖြေ ကြားခြင်း
မင်္ဂလာပါ ဗျာ ... အခုတလော ကျနော် ရဲ့ blogger မိတ် ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အိမ်ကို မရောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဦးစွာတောင်းပန် လိုပါတယ် ... မရောက်ဆို ဒီ post လေးကို အချိန်ပေးပြီး ရေးဖြစ်နေလို့ ပါ ... LIVING TOGETHER နှင့် အမျိုးသမီး အခွင့်ရေး ဆိုတဲ့ post လေး ရေးဖြစ်ပုံကို အနည်းငယ် ရှင်းပြ လိုပါတယ် ... ။
လွန်ခဲ့သော တစ်လလောက် က ကျနော် ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ရှိတဲ့ LIVING TOGETHER နေထိုင်သော စုံတွဲ မှ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဇတ်သိမ်း မလှတဲ့ အခြေနေကို " ဒါလား LIVING TOGETHER " ဟု ဆိုသော post လေးရေးဖြစ်ပါတယ် ... သို့ သော် ကျနော် ရေးသားချက်မှာ တစ်စုံတစ်ဦးကို ရည်ရွယ် သလို ဖြစ်နေသည် ဟု မိမိကိုယ်ကိုယ် ယူဆ သောကြောင့် ထို post လေးကို မတင်ဖြစ် ပဲ " LIVING TOGETHER နှင့် အမျိုးသမီး အခွင့်ရေး "ခေါင်းစဉ်တက် ကာ ကျနော် သင်ကြားခဲ့ဖူးသော ဥပဒေ ဘာသာရပ်များ နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ကျနော်ရဲ့ အားလပ်ချိန် တော်တော်များများ ကို ဒီ post လေးနှင့် အချိန် ကုန်စေခဲ့ပါတယ် ... ။
ကျနော် ရေးသားရခြင်း ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ LIVING TOGETHER နေထိုင်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦး အတွက် ဥပဒေ အရ အကာကွယ် မရှိသလို ၊ လူနေမှု့ဘဝ အတွက် ကောင်းကျိုးမပေး တက်ပုံ ကို ဖော်ပြရေးသားလို ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် ... သို့ သော်လည်း စာရေးသား ညံ့သော ကျနော် ရဲ့ ရေးသား ချက် မှာ စာဖတ်သူအနေ နှင့် ကျနော် ရည်ရွယ်လိုသော အကြောင်းရာများ မရရှိပဲ တစ်စုံတစ်ဦး (သို့ )မဟုတ် အဖွဲ့ စည်း တစ်ချို့ ကို တိုက်ခိုက်ရေးသားသည် ဟု ထင်သွားပါ က ဒီ post လေး ကိုရေးမိသော ကျနော် မောင်ဘုန်း ဦးစွာ တောင်းပန်ပါတယ် ...ဗျာ .... ။
အားလုံးလည်း သိပြီးသားပါ … ။ LIVING TOGETHER ဆိုတာ အနောက်တိုင်း ဒေသမှ ကူးစပ်လာတဲ့ လူမှု့နေထိုင်တဲ့ ပုံစံတစ်ခုပါ … ။ သူတို့ အတွက်တော့ လက်မထပ်ခင် LIVING TOGETHER နေထိုင်ခြင်းဟာ ကောင်းဆုံး အိမ်ထောင်ဖက် ရှာတဲ့ နည်းတစ်ခုလို့ယုံကြည်ကြပါတယ် … ။
ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုး အတွက်တော့ LIVING TOGETHER ဆိုတာ …. ငါးပါးသီလ ထဲမှ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ ဆိုတဲ့ သိက္ခာပုဒ် နှင့် ဘယ်လိုမှ မကိုက်ညီသလို တစ်လင်တစ်မယား စနစ် ဆိုတဲ့ ရိုးရာအစဉ်လာ ကို ဆန့် ကျင်သလို ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ ဟာ မြန်မာလူမျိုးများအတွက်တော့ ဘယ်လို့မှ မဖြစ်သင့် ဘူးလို့ပြောမယ် ဆိုရင် ကန့် ကွက်မဲ့သူ မရှိ လောက်ဘူး ထင်တယ်နော် …. ။
သို့ သော် ခေတ်မှီလာတဲ့ လူ့ နေမှု့ပုံစံ နှင့်အတူ LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ ဟာလည်း တစ်စ တစ်စ မြန်မာလူမျိုးများကြား ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ … ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများနှင့် မကိုက်ညီသော LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ ကို ဘယ်သူမှ ထိထိရောက်ရောက် မဆန်ကျင် သလို နိုင်ငံတော် အနေနှင့်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံတွေလို LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထားဆီးတဲ့ ဥပဒေမရှိပါဘူး … ။ LIVING TOGETHER ကို တရားဝင် လက်ခံ ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ LIVING TOGETHER ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်ရေး ထိန်းချုပ်ထားတာ တွေ့ ရပါတယ် … ။
ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများ ဘာကြောင့် LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ကို ဆန့် ကျင်တာ ၊ ကန့် ကွက်တာမျိုး မလုပ် ရတာလည်းလို့စဉ်းစားမိ ပါတယ် … ။ နိုင်ငံတော် နေနှင့် တော့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု့ ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းတဲ့ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း မှု့အလွန်းအားနည်းတာ တွေ့ ရသလို ၊ LIVING TOGETHER ဆိုသောနေထိုင်မှု့ မှာ နှစ်ဦးသဘောတူဆိုသည့် စကားရပ်ကြောင့် မဖြစ်သင့်ဘူး ဆိုသော် လည်း ကန့် ကွက်မို့ဆန့် ကျင်မို့ခက်ခဲ တာတွေ့ ရပါတယ် … ။
ထို့ ကြောင့်သာ LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ ဟာ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုးကြား ကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ တယ်လို့ထင်မိတယ် … ။
ပြည်တွင်းမှာတော့ လုံးပါး ပါး လျှက်ရှိတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ကျန်အယူဆများကြောင့် LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ ဟာ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ကြီး မဟုတ်ပင်မဲ့ နေရာ တိုင်းလိုလို မှာ တွေ့ ရတက်ပါတယ် ။ ပြည်ပရောက် မြန်မာများ အတွက်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး လို့ ပြောရအောင် ဖြစ်နေပါပြီ ။
၆ လကြာနေထိုင်ခဲ့သော ထိုင်း နိုင်ငံ နှင့် ယခု ကျနော် နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များမှာ LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့များစွာကို တွေ့ ဆုံ ခဲ့ရပါတယ် … ။ ကျနော် တွေ့ ဖူး တဲ့ LIVING TOGETHER နေထိုင် မှု့ ကို ခွဲခြားရ လျှင် နှစ်မျိုး တွေ့ ရ ပါတယ် … ။
ပထမတစ်မျိုးကတော့ နှစ်ဦးသဘောတူ အများရှေ့ မှာ လင်မယား အဖြစ် တူတူနေကြပြီး အနည်း ဆုံး ၆ လ အများဆုံး ၂ နှစ်လောက် တူတူ နေကြ တာတွေ့ ရပြီး … နောက်ဆုံးမှာ တစ်ဦးဦးက မြန်မာပြည်သွား တာ မျိုး နှင့် သူတို့ရဲ့ LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ ကို အဆုံးသတ်တာတွေ့ ရသလို … ၊ တချို့ လည်း တရားဝင် အကြင်လင်မယား အဖြစ် သူတို့ ရဲ့ LIVING TOGETHER မှု့ကို အဆုံးသတ်လိုက်တာ ရှိပါတယ် ။
ဒုတိယ တစ်မျိုးကတော့ တစ်ယောက်တစ်နေရာ ဆီ နေကြပင်မဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက် တွေမှာ တူတူ နေထိုင်ကြပြီး အများ အမြင်မှာတော့ ချစ်သူဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေး နဲ့ပေါ့ …. ။ နေထိုင်မှု့ အနည်း ဆုံး တစ်လ လောက် တွေ့ ရ သလို ၂ နှစ်လောက် ကြားတာလည်း ရှိပါတယ် … ။ ဒီလို နေထိုင်တဲ့ LIVING TOGETHER တွေမှာ ဇာတ်သိမ်း မလှတာ အများဆုံး တွေ့ ရတက်ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် တစ်နှစ်လောက် အကြာ အတူ LIVING TOGETHER နေထိုင်တဲ့ သူတွေ အဖြစ်များတာပိုတွေ့ ရပါတယ် … ။ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ပထမတစ်မျိုးထက် အခုလို နေထိုင်တဲ့ LIVING TOGETHER ပုံစံ ပိုများတာတွေ့ ရပါတယ် ။
နောက်တစ်ခု ဒုတိယနည်း ဖြစ်တဲ့ LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ ဟာ အရမ်းရှုပ်ထွေး တာတွေ့ ရပါတယ် ။ နှစ်ဦးသဘောတူ ဆိုပင်မဲ့ တစ်ခါတစ်လေ မိမိ ချစ်သူအပေါ် ယုံကြည်မှု့ လွန်ကဲ ခြင်း (သို့ ) အချစ်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ခံရခြင်း ကြောင့် အလိုမတူပင် မဲ့လည်း LIVING TOGETHER နေ ခဲ့ ရတဲ့ဖြစ်စဉ် တွေ လည်း ရှိပါတယ် … ။ ဒီနေရာမှာ အခြေခံလူတန်းစားများ ဖြစ်တက်တာလေ ပြောပြချင်ပါတယ် ။
LIVING TOGETHER နေခဲ့ရလို့ ဖြစ်စဉ် တွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးများ ရှိပါတယ် နဂို ကတည်းက အလိုမတူ ဖြစ်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဒီ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျတ်ချမို့ကြိုးစားတာပေါ့ … ဗျာ …။ အဲ … သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ရိုးရာဆေးမြီးတို တွေနဲ့တခါတလေလည်း အဆင်ပြေသလို တစ်ခါတစ်လေ မှာ အရေးပေါ် အခြေနေနဲ့ဆေးရုံထိရောက်သွားရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေလည်း ရှိပါတယ် ။ အဲ့လို ဆေးရုံ ရောက်ထိ တိုင် ကိစ္စကမပြီးပါ ။ တာဝန်ရှိသူက မေးပြီးလေ … ဘာကြောင့် ဖြစ်လည်း ပေါ့ … ဒီတော့ အမှန်တိုင်းပြောပြ ပါတယ် (ရိုးသားသည် ကို ) ။
“ ဒါ တရာမဝင် ကိုယ်ဝန် ဖျတ်ချ မှု့ပဲ … ” !!!!!!!!! ….. “ ရှင် …….. ” ….မရှင့် …. နဲ့အမိ … !!!!
ရာဇသတ် ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၁၂ အရ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်သည်အထိ အရေးယူနိုင်တယ် …. ကိုယ်ဝန်အရင့် အမာဖြစ်ပါက ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် အထိ ချမှတ်နိုင် သလို ၊ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူမှ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစေရန် အတင်းအကြပ် တိုက်တွန်း ပြောဆိုပြုမူ ခြင်းများကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခဲ့ပါက ဥပဒေပုဒ်မ ၃၁၃ အရထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျသည်အထိ အရေးယူနိုင် တယ် …. အမိ …ရဲ့ …… ။
နောက်ဆုံးတော့ ဒူး နဲ့ မျက်ရည်သုတ်တဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်း တစ်ခုပေါ့ … ဒါက ပြည်တွင်း မှာ ရှိတဲ့ ပညာမတက် ဆင်းရဲတဲ့ အမျိုးသမီး များ အဖြစ် များတဲ့ ဖြစ်ရပ် လေး တစ်ခုပါ … ။
( မြန်မာ ပြည်မှာ တရား ဝင် ကိုယ်ဝန် ဖျတ်ကျ ခွင့် တော့ ရှိပါတယ် …. သို့သော် ကိုယ်ဝန် ဆောင် မိခင် ၏ ကျန်းမာ ရေး အခြေနေ ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ တင်ပြ နိုင် လျှင် မိခင် ၏ ကျန်းမာ ရေးအခြေ ကြောင့် တရားဝင် ကိုယ်ဝန် ဖျတ်ချ ခွင့် ရှိပါတယ် )
ကယ် … ပညာတက်တဲ့ မမများ ဖြစ်တက် တာလေးလည်း ပြောအုံးမယ် ဗျာ … ကျနော် ပြောခဲ့ တဲ့ ဒုတိယ နည်းအတိုင်း ချစ်သူ နဲ့LIVING TOGETHER နေကြပါတယ် …။ အရမ်းလည်း ချစ်တာကို … ချစ်သူ အပေါ်လည်း ယုံကြည်တယ်လေ …။ နောက်ပြီ ချစ်သူ လည်း ပြောထားတယ်လေ ဟိုလ ဒီလ ၊ ဟိုနှစ် ဒီနှစ် မှာ လက်ထပ်မယ်ပေါ့ …. ။ အယ် …. အဲ့လို နဲ့မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ရပါလေ ရော ဗျာ … ဒီ တော့ အရေးပေါ် အခြေ နေကြောင့် ချစ် သူ ကို လက်ထပ် မို့ပြောတာပေါ့ ( ချမ်းချမ်း သီးချင် လေး ဆိုလို့ ……. တစ်ကယ် ဆိုရင် အချစ် ပဲလိုတယ် …. ဘာကြောင့် သတ္တိ မရှိလည်း ကွယ် ………….. ) အယ် … ချစ်သူ ဆိုတဲ့ ဆရာသမားက အဲ့ကျမှ အ … အိ … ဥ … အဲ … ဘာမှ မသိတဲ့ သူငယ်တန်း ကလေး လို အမှုရာ တွေ ဖြစ်ကုန် ရော … လေ … ။
ပညာတက် မမ များလည်း ခပ် ညံ့ညံ့ မှ မဟုတ်တာ ၊ ဒီတော့ မှ ချစ်သူအပေါ် သံသယဝင်ပြီး သေချာ စုံစမ်းတော့ … မိန်းမ ရှိတာ သိရပြီလေ …။ အယ် …နောက်ဆုံးတော့ ကွဲကြ ပြဲကြ တာပေါ့ … ဒီလောက် နဲ့လည်း မကျေနပ် နိုင်ဘူး လေ … ဒင်းက ယုတ်မာတာကို … ။ ဒါကြောင့် နည်းစပ်ရာ ရှေ့ နေနဲ့တိုင်ပင် ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင် ပြောပြကာ ဒင်းကို ထောင်ကျမို့စီစဉ်တာပေါ့ ….. သက်သေအနေ နှင့် ဗိုက်တစ်လုံး အခိုင်မာ ရှိနေတာကို …. ။
ဆရာ ဒီလူယုတ်မာကို ပုဒ်မ ၃၆၆ (လိမ်လည် ကာမသွေးဆောင် အကျင့်ဖျက်ဆီးစေခြင်း )
ပုဒ်မ နဲ့တရား ဆွဲချင်တယ် ဆရာ … အဲ့ဒါ ခိုင်မာတဲ့ အမှု့တစ်ခုဖြစ်အောင် တည်ဆောက် ပေးပါနော် ...
ရှေ့ နေ …
ဝမ်းနည်းပါ တယ် ဗျာ …. အစ်မ ပြောတဲ့ ရာဇသတ် ကြီး ပုဒ်မ ၃၆၆ (က) နဲ့(ခ) မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လိမ်လည် ကာမသွေးဆောင် အကျင့် ဖျက်ဆီးစေခြင်း ဆိုတဲ့ စကားရပ် ဟာအရွယ် မရောက်သေး တဲ့ မိန်းခလေး ပဲ (အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးသူ ) အကျုံ ဝင်ပါတယ် လို့ ဖော်ပြထားအတွက် ဘယ်လို မှ မဖြစ် နိုင်ပါဘူး …။ နောက်ပြီ ရာဇသတ်ကြီး မှာ အမျိုးသမီး အခွင့်ရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရာဇဝတ် မှု့ဖြစ်စေတဲ့ ၁၄ ခန်း ပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက် အားလုံးဟာ အလိုမတူ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ ရှိနေပါတယ် ….. အခု ဖြစ်ရပ်မှာ နှစ်ဦး သဘောတူ LIVING TOGETHER ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ရာဇဝတ် မှု့တစ်ခု ဖြစ်အောင် တည်ဆောက် မို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ် နိုင်လို့ ပါ …. ဗျာ …. ။
အမျိုးသမီး ……. ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုနည်း နဲ့တရား ဆွဲလို့ရမလဲ ဆရာ …. ။
ဟုတ်ကဲ့ တရားမ နည်းနဲ့ဆွဲ လို့ ရပါတယ် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေ မှာ အကြင်လင်မယား ဖြစ်မို့အခန်းနားမလို ၊ စာချုပ်မလို ဟု ဖော်ပြထား လို့LIVING TOGETHER နေထိုင်ခြင်းဟာ လင်မယား အရာမြောက် တယ်လို့ပြောလို့ ရပါ တယ် ။ အခု ကိုယ်ဝန်ရှိတယ် ဆိုတော့ ပိုခိုင်လုံ တာပေါ့ ဗျာ ….… ဒါကြောင့် တရားမနည်းအရ မယားစရိတ် နဲ့ကိုယ်ဝန်အတွက် ကလေးစရိတ်ကို မယားပြိုင် အနေ နဲ့တောင်း ဆိုလို့ ရပါ တယ် ….
ရှင် …. ဘာလို …. မယားပြိုင်..... ဟုတ်လား … ကျမ က အခု ကိစ္စမှာ အလိမ်ခံ ရတာလေ …။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ပြောပါ ဆရာ ရယ် … ကျမ လည်း မတရား ခံ ရသေးတယ် … မယားပြိုင် ဆိုတဲ့ စကား က …… အခု ကိစ္စ မှာ ကျမ … က ဒီလို ဖြစ်လို ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ လို သလို ဖြစ် မနေဘူး လား ဆရာ … … ။
ရှေ့ နေ …….
ကျနော် တို့တွေ အလုပ် အကြောင်း ပဲ ပြော ရအောင် ဗျာ … ။ ကျနော် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်
ဒါပင်မဲ့ …. အစ်မ ပြောတာက ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ လူမှု့ရေးရာပါ … ဥပဒေ မှာ LIVING TOGETHER ဆိုတာ မရှိ ပါဘူး ။ မယားငယ် ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး … ။ မယားပြိုင်ဆိုတာပဲ ရှိပါတယ် … ဒါကြောင့် LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့(သို့ ) တခြားကာမ ဆိုင်ရာ ပြစ်မှု့တစ်ခုခု ကို တရားမ နည်း နဲ့တရား ဆွဲ မယ် ဆို ၇င် …. မယား ပြိုင် နေ နဲ့ပဲ …. တရား စွဲ လို့ ရပါတယ် … ။
အမျိုးသမီး …… ရှင် …………….!!!!!!!!!!!!!!!!
နောက်ဆုံးတော့ တစ်ခုလပ်ဘဝ … အလိုလိုရပြီး LIVING TOGETHER လည်း အဆုံးသတ်သွား တာပေါ့…. ။
နောက်ပြီ … ကျနော်တို့မြန်မာ့ လူ့ ပတ်ဝန်း ကျင်မှာ ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း နှစ်ဦးသဘောတူ ဆိုတဲ့ LIVING TOGETHER နေထိုင် မှု့ မှာ ယောကျာ်း လေး နှင့် မိန်းကလေး ဟာ နှစ်ဦးသဘောတူ ဆိုပင်မဲ့ တစ်ကယ်တမ်း ပတ်ဝန်းကျင်က အများဆုံး ကဲ့ရဲ့ခံရသူ ကတော့ မိန်းကလေး ဖြစ်နေပါတယ် ။ နှစ်သဘော တူဆိုသော်လည်း ထို ဖြစ်ရပ်မှာ မိန်ကလေး တစ်ဦးတည်း မှားနေသလိုဖြစ်နေတဲ့ အတိုင်း ပြောတက်တဲ့ ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင် အကြောင်း ကို မှားနေတဲ့ အမှန်တရား ဆိုတဲ့ post လေး တစ်ခု ရေးခဲ့ဘူးပါတယ် ။
အခု နည်းနည်းလောက် ထပ်ပြောပါရစေ ဗျာ …. ။ ယနေ့အချိန်ခါ မှာ အမျိုးသမီး များ နေရာ တိုင်းလိုလို တန်းတူအခွင့်ရေး ဆိုတာ အော် နေတာတွေ့ ရ ပါတယ် ။ နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီး ဘာညာ ဆိုပြီး အရမ်းလှ တဲ့ ခေါင်းစဉ် လေးတွေ နဲ့ရှိတဲ့ တရားဝင် တာရော မဝင်တာရော ပေါ့ အများကြီး ရှိပါတယ် …
သို့ သော် … ယနေ့အချိန်ထိ အမျိုးသမီး များ လူကုန်ကူး ခံရမှု့ ၊ ကာမ ဆိုင်ရာ မတရားပြုကျင့်ခံရမှု့ဆိုတဲ့ တောင်းဆို ချက် အဆင့် လောက်သာ အများပြည်သူ သိအောင် လုပ် နိုင် ပြီး ….
၁ ။ မြန်မာအမျိုးသမီး များ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ဆိုင်ရာကို ဥပဒေ အရ ကန့် သတ် ခံထားရ ခြင်း ။
၂ ။ နှစ်ဦးသဘောတူ ဆိုသော LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့တွင် အမျိုးသမီးများ အတွက် ထိရောက်သော ကာကွယ် ပေးတဲ့ဥပဒေမရှိ ခြင်း ။
၃ ။ မြန်မာအမျိုးသမီးများ အတွက် ဥပဒေအရ ကာကွယ် ပေးထားသော ရာဇသတ်ကြီး ပါ အမျိုး သမီး ဆိုင်ရာ ပြစ်မှု့၁၄ ခန်း ၊ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့ ဓလေ့ ထုံးတမ်း ဥပဒေ ၊ ၁၉၅၄ ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းမများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ တို့မှာ အလွန် အားနည်းနေ ခြင်း ။
၄ ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေ နှင့် ၁၉၅၄ ဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းမများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ ကို ခေတ် အဆက်ဆက် ပြင်ဆင် ခဲ့ သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းမများ ဘာသာခြား နှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ၊ တိုင်းရင်းသား ဘာခြား အမျိုးသမီးများ လက်ထပ်ထိမ်းမြား ခြင်း ဆိုင်ရာ များကို တန်းတူအခွင့်ရေး ရရှိနိုင်သော တိကျတဲ့ ပြဋ္ဌာန်း ပြင်ဆင် မှု့မရှိ ခြင်း။
စသည့် အမျိုးသမီး ဆိုင်ရာအခွင့်ရေး နှင့် ပတ်တဲ့ တောင်းဆို မှု့တွေ ပြုလုပ် ခြင်း မရှိသလောက် ရှား နေတာတွေ့ ရပါ တယ် … ။ လုံးဝ မရှိဘူး တော့ မဟုတ်ဘူးနော် … ရှိတော့ ရှိပါတယ် … အရမ်း နည်းပါတယ်လူကုန်ကူး မှု့လိုမျိုး တိကျ ခိုင်မာတဲ့ တောင်းဆို မှု့မျိုးတော့ မတွေ့ ရလို့ ပါ … ။
ကျနော် အထက်ပါ အမျိုးသမီး အဖွဲ့စည်း များကို လှောင်ပြောင် ပြစ်တင် ပြော ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး … ။ စုစုပေါင်း ကိုတည် အရေး တွက် နှင့် စား ဆိုသော မျမ်းမျှ ခြင်း အရေတွက် နှင့် ကြည့်လျှင် … လူကုန်ကူး ခံရခြင်း ၊ ကာမ ဆိုင်ရာ မတရား ပြု ကျင့် ခံ ရခြင်း ဆိုတဲ့ အရေတွက် ဟာ ကျနော် ဖော်ပြ သော မြန်မာ အမျိုး သမီး လူထု တစ်ရပ် လုံး တွက် တရား မျှတ မှု့ ဆို တဲ့ အရေအတွက် နှင့် နှိုင်း လျှင် ကျနော် ဖော် ပြသော အချက် များသည် … ကန့် ကွက် တောင်းဆို သင့် သည်လော …….. ။
ဟုတ်ပြီ … ကျနော် တို့နည်းနည်းလောက် တွေး ကြည့် ရအောင် ဗျာ …. ဘာကြောင့် ထိရောက် တဲ့ တောင်းဆို မှု့မလုပ် နိုင် တာလည်း လို့ပါ …. ပြည်တွင်း မှာ အမျိုးသမီး ဆိုင်ရာ ထိရောက်တဲ့ အဖွဲ့ စည်း နည်းသလို ပြည်ပ ရောက် အဖွဲ့စည်း များ အနေ နှင့် လည်း ဥပဒေ ပြင်ပ ဆို သောကြောင့် သိမ့် ပြီး မထိရောက် လှပါဘူး။
ဒါဆိုရင် မြန်မာ အမျိုး သမီး လူထု အနေ နှင့် ရော … အားနည်းနေတဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုင် ဥပဒေ တွေ ကို ဘာကြောင့် မကန့် ကွက် တာလည်း လို့ မေးစရာ ရှိပါတယ် … ။
ဥပဒေ ဆိုင်ရာ နှင့် ပတ်သက် လို့အမျိုးသမီး မှဟုတ်ပါဘူး … မြန်မာ လူမျိုး တစ်စု လုံး ဥပဒေ ဆိုင်ရာ အသိ အလွန် အားနည်းတာ တွေ့ ရပါတယ် …။ ဥပမာ ဆိုရရင် နိုင်ငံ တိုင်းလိုလို မှာ နိုင်ငံ သာ ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် ရပိုင်ခွင့် ဆိုတာကို နိုင်ငံ သားတိုင်း အပြည့်စုံ မဟုတ် တာတောင် တော်တော် များများ သိကြတာ တွေ့ ရပင်မဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ သား ၁၀ ယောက် ကို နိုင်ငံ သား ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ဆိုတာ ဘာလည်း လို့ မေး၇င် … မသိဘူး ဆိုတဲ့ အရည် အတွက် အ၇မ်း များတာတွေ့ ရပါတယ် …။
ဘာကြောင့် လည်း ဆိုရင် … စီပွားရေ ၊ နိုင်ငံရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ လူမှု့ ရေး ၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ ဘက်စုံ ဆိုင်ရာ အတွက် သီးသန့်ထုတ်ဝေ သော စာစောင်တွေ ရှိသော် လည်း ယနေ့ချိန် ထိ ဥပဒေ ရေးရာ နှင့် ပတ်သတ် ပြီး အများ ပြည်သူ အလွယ် တကူ လေ့လာ နိုင်သော ဥပဒေ ဆိုင်ရာ သီသန့် ထုတ်ဝေ တဲ့ စာစောင် မရှိ ပါဘူး ။
နောက်တစ်ခု … တရားစီရင်ရေး ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ လူမျိုးတွေ ရဲ့ ရှေ့ အစွဲ လေးတစ်ခုပါ … တရားရုံးတို့ဂတ်တို့ဆို လျှင် မကောင်း တဲ့ နေရာလို့သတ်မှတ် ကြပါတယ် … မသွား မဖြစ် လို့သွားရင် တောင် အိမ်ပြန်ရောက် လျှင် ခေါင်းလျှော် တဲ့အယူဆ ရှိ ပါတယ် …. ။
တရားစီ ရင်ရေး ဆိုတာ ကလည်း ကျောင်းတော် မှာ သင်ပေးသလို ကြီးတဲ့ အမှု့ငယ်အောင် ၊ ငယ်တဲ့ အမှု့ပပျောက် အောင် စီရင် ရတယ် ဆိုသော် လည်း တစ်ခါတစ်လေ မှာ ငယ်တဲ့ အမှု့ကြီးသွားတက် သလို ၊ ကြီးတဲ့ အမှု့အကျိုးနည်း သွားတာမျိုး ဖြစ်သွား သောကြောင့် မြန်မာ လူမျိုးတွေ တရားရုံး တို့၊ ဂတ် တို့ကို မကောင်းတဲ့ နေရာ လို့သတ်မှတ် တယ်လို့ထင်မိပါတယ် … တရာစီရင်ရေးမှာ ဒီလို ဖြစ်ရတာလည်း ခေတ် အဆက်ဆက် ……………. အယ် … တော်ပြီ ဗျာ … ရေး ၇င်းနဲ့ဘေး ရောက်ကုန် ပြီ စာလည်း အတော် ကို ရှည်နေပြီ ။
ကယ် လက်စ သတ်တော့ မယ်ဗျာ … blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း တို့ ရေ … ကျနော် တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ နေရသော LIVING TOGETHER နေထိုင်မှု့ဟာ ကျနော် တို့မြန်မာ လူမျိုး အတွက် ဘာသာရေး အရ ပဲ ကြည့်ကြည့် ၊ မြန်မာ့ရို ရာ အစဉ်လာ အရ ဆိုဆို ဘယ်လို မှ မဖြစ်သင့် ဘူး ဆိုသော် လည်း တွေ့ မြင် နေရပါတယ် ။ နှစ်ဦး သဘော တူ ဆိုသော် လည်း LIVING TOGETHER နေထိုင်သော မြန်မာ အမျိုး သမီးတစ်ဦး အတွက် ကောင်းကျိုး မရှိ လို့ပြောရအောင် ရှိပါတယ် …။
နောက်တစ်ခု တန်းတူ အခွင့်ရေး ဆို သော မြန်မာ အမျိုး သမီး များအတွက် ကျနော် သိသလောက်လေး
ခေတ်အဆက်ဆက် ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့သော အမျိုးသမီး ဆိုင် အခွင့် ရေး နှင့် လက်ထပ် ထိမ်းမြား ခြင်း ဆိုင် ရာ မြန်မာ့ ဓလေ့ ထုံးထမ်း ဥပဒေ များ အကြောင်း ကို ဆက်လက် ရေးသာ လိုပါ သည် ။
သို့ သော် ၆ နှစ်ကြာ ဥပဒေ ဘာသာ ရပ် နှင့် ဝေးကွာ နေသည် ကတစ်ကြောင်း ၊ လက်ရှိ အစို အသစ် လက်ထပ် တွင် မူရင်း ဥပဒေ ၅၆၆ ခု အနက် မှ ၁၇၆ ခုကို ပယ် ပျတ်ပြီး ၁၇၇ ခု အသစ် ပြဋ္ဌာန်း ထား ပါသောကြောင့် အသစ်ထွက်ရှိ သော ဥပဒေ များ နှင့် ကျနော် ရေးသာ ချက် ကိုက် ညီ မှု့ ရှိမရှိ ပြန်လည် လေ့လာ မှတ်သား ရခြင်း ၊ ကျနော် အတွက် စာရေးရန် အာလပ် ချိန် တစ်ရက် ၃ နာရီ ရှိသော်လည်း ထို အချိန် မှ ပြန်လည် လေ့လာ စာဖတ် ခြင်း အချိန် ပြန် ပေး ရသောကြောင့် ဘယ်နေ့တင်ဖြစ်မယ် ဆိုတာတော့ အတိကျ မသိ နိုင်ပါ လို့အသိပေးရင် … ဒီ post လေး ကို အဆုံး သတ်လိုက်ပါပြီ …။
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:45 AM 18 comments